Zlatan Ibrahimović oo sagootiyey Paris Saint-Germain, isagoo rikoor cusub dhigay + Sawirro – Gool FM
Zlatan Ibrahimović oo sagootiyey Paris Saint-Germain, isagoo rikoor cusub dhigay + Sawirro
Haaruun May 16, 2016
(Paris) 15 Maajo 2016 – Weeraryahanka xulka qaranka Sweden ee Zlatan Ibrahimović ayaa soo gabagabeeyey waqtigiisii kooxda Paris Saint-Germain ee Waddanka Faransiiska, maadaama uu heshiiskiisa ku ekaa xilli ciyaareedkan, laakiin waxa uu kooxda Faransiiska uga tagay taariikh lama ilaawaan ah.
Ciyaartii ugu dambeysay ee PSG 4-0 uga adkaatay kooxda Nantes ee ka tirsanayd horyaalka Ligue 1 ee dalka Farasniiska ayaa Ibra waxa uu rikoor cusub u dhigay kooxdiisa, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu goolasha badnaa kooxda muddo hal xilli ciyaareed ah, waxaana uu rikoorkaas ku gaaray 37 gool.
Inta aysan ciyaartu bilaaban Zlatan Ibrahimović waxa uu xagga gooldhalinta kala sinaa laacibka la yiraahdo Carlos Bianchi oo xilli ciyaareedkii 1977-78 rikoor la jabin waayey dhigay, markii uu hal xilli ciyaareed ku dhaliyey 36-gool, hase yeeshee Ibra ayaa kulankaasi dhaliyey hal gool uu ku noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda kooxda PSG hal xilli ciyaareed.
Dhammaadkii ciyaarta kaddib ayuu Ibrahimović oo 34 sano jir ah xaqiijiyey inuu ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey ee PSG, waxaana uu yiri: “Waxaan ciyaaray kulankii ugu dambeeyey, waxaan halkaan imid anigoo boqor oo kale ah, waxaana ka tagayaa halkaan anigoo ah halyeey.”
Ibrahimović ma uusan sheegin kooxda uu u wareegi doono, laakiin waxaa la la xiriirnayaa kooxo Yurub u badan oo ay ka mid yihiin Manchester United iyo AC Milan oo uu hadda ka hor u ciyaaray intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2012 oo uu dhaliyey 56-gool 85 kulan.
Goorta la ciyaari doono kulankii baaqday ee kooxaha Manchester United iyo Bournemouth oo la shaaciyey
Xiddiga kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Kane oo ku guuleystay Kabta dahabka ee Premier League